Ukubukwa Kwehlengethwa Ezingu-6 - I-Airbnb
Ukubukwa Kwehlengethwa Ezingu-6
La Mercy, KwaZulu-Natal, iNingizimu Afrika
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Trevor
Ehlelwe e-La Mercy Beach ephawulekayo, leli fulethi likunikeza indawo yokuvakasha yasebhishi enethezekile. Jabulela ama-sunris ahlaba umxhwele futhi ubuke amahlengethwa esiphithiphithi e-Indian Ocean efudumele usuka endaweni yakho yangasese.
Njengoba nje yimizuzu engu-15 uma uhamba ngemoto usuka e-King Shaka International Airport, e-Umbhlanga, e-Ballito nase-Udloti, kunombungazi wezindawo zokudlela nezinto ongazenza khona lapho ukhona. Kungcono uma uvakashela ibhizinisi noma uhamba nge-KwaZulu-Natal ngesikhumulo sezindiza.
Leli fulethi elihle linamakamelo okulala amabili (umbhede omkhulu owodwa nombhede olala abantu ababili owodwa) amagumbi okugezela angu-2, ikhishi elinakho konke kanye negumbi lokuphumula elivulekile olwandle. Kunezindawo ezimbili zokupaka eziphephile futhi ifulethi line-Wi-Fi yamahhala engenamkhawulo, i-DSTV ne-Netflix yokuzijabulisa kwezivakashi.
4.85 · 59 okushiwo abanye
I-La Mercy iyidolobhana elihle eliseceleni kolwandle elijulile emasikweni nomlando waseNdiya onemibalabala. Ihlotshiswe phakathi kwezinsimu zikashukela eziluhlaza kanye noLwandle lwase-India olungapheli, i-The Village itholakala e-Dolphin Coast phakathi kwe-Umbhlanga ne-Ballito cishe amakhilomitha angu-25 enyakatho yeTheku, ikhaya lechweba eliphithizela kakhulu e-Afrika.
I-La Mercy ibheke uLwandle lwase-India futhi idlulela enyakatho isuka e-Udloti River ngasogwini. Lesi sigaba esihle sebhishi elinesihlabathi sinendawo ejulile lapho amagagasi aphansi enza khona amachibi anamatshe asogwini. Amanzi asogwini acebile ekuphileni kwasolwandle okunikeza amathuba angenamkhawulo okudoba ogwini kanye nesikebhe esikhulu sokushushuluza eqhweni kanye nokudoba nge-ski. Uhamba ebhishi cishe njalo uzojabula ngemibukiso yama-dolphins adlala emagagasini kanye nemikhomo ephula inkathi yonyaka. Ukuze usebenze kakhudlwana thatha ibhayisikili elinamafutha bese ugibela amabhishi angapheli enyakatho ukuya e-Ballito noma eningizimu ukuya eThekwini.
Umlomo womfula uvulekela olwandle lapho kufika imvula futhi phakathi kwakha i-lagoon ebanzi ejulile elungele ukugwedla emanzini, ukugwedla ngesikebhe ne-kitesurfing. I-estuary inamahlathi ama-mangrove, okuyikhaya lezinyoni eziningi zamanzi kanye ne-Fish Eagles, okwenza kube ipharadesi labalindi bezinyoni.
Ngokufinyelela kalula ezilondolozweni ezinkulu ezinhlanu zemidlalo kanye Nezindawo Zamagugu Omhlaba ze-Simangaliso (St Lucia) i-Wetland Park enyakatho kanye ne-UKhlahlamba (Drakensberg) Ezintabeni ezisentshonalanga, i-La Mercy iyibhodi elihle kakhulu lokuhlola lesi Sifundazwe esimangalisayo sase-KwaZulu-Natal.
Amasevisi Okuphathwa Kwezindawo Ezivakashelwayo ayibhrendi yamafulethi e-premium aphethwe ngu-Trevor Pitt no-Rob Roberts, bobabili abaye baba nokuphathwa kokungenisa izihambi ukuphila kwakho konke. Sinentshisekelo yokunikeza isevisi eseqophelweni eliphezulu futhi senza okungaphezu kwalokho okulindelekile ukuze siqinisekise ukuthi izivakashi zethu zinethezekile. I-DMS Brand iyindinganiso yesevisi kanye nesethulo esisebenza kuwo wonke amafulethi ethu. Kusukela kumashidi amhlophe kakotini, amathawula antofontofo kuya emakhishini anakho konke, i-cable TV ne-Wi-Fi, siqinisekisa ukuthi ifulethi lilungele zonke izidingo. I-DMS iqinisekisa ukuthi ungabhukha ngokuzethemba wazi ukuthi kunenkampani enokwethenjelwa enakekela ifulethi ngalinye.
Sishaya ucingo uma kukhona noma yini oyidingayo phakathi nokuhlala kwakho!
Amasevisi Okuphathwa Kwezindawo Ezivakashelwayo ayibhrendi yamafulethi e-premium aphethwe ngu-Trevor Pitt no-Rob Roberts, bobabili abaye baba nokuphathwa kokungenisa izihambi ukuph…
Hlola ezinye izinketho ezise- La Mercy namaphethelo